AddEvent: ၀ က်ဘ်ဆိုက်များနှင့်သတင်းလွှာများအတွက်ပြက္ခဒိန်ဝန်ဆောင်မှုထဲသို့ထည့်ပါ Martech Zone
တစ်ခါတစ်ရံ၎င်းသည်မကြာခဏ web developer များကိုအကြီးမားဆုံးသောခေါင်းကိုက်စေသည့်အရိုးရှင်းဆုံးအလုပ်များဖြစ်သည်။ သူတို့ထဲကတစ်ခုမှာရိုးရှင်းပါသည် ပြက္ခဒိန်မှ Add အွန်လိုင်းပြက္ခဒိန်ပရိုဂရမ်များနှင့် desktop application များမှတစ်ဆင့်အလုပ်လုပ်သောဆိုဒ်များစွာတွင်သင်တွေ့ရသောခလုတ်။
၎င်းတို့၏အဆုံးမဲ့ဥာဏ်ပညာအရအဓိကပြက္ခဒိန်ပလက်ဖောင်းများသည်အဖြစ်အပျက်အသေးစိတ်ကိုဖြန့်ဝေရန်စံနှုန်းကိုဘယ်တော့မျှသဘောမတူခဲ့ပါ၊ ရလဒ်အနေနှင့်အဓိကပြက္ခဒိန်တစ်ခုစီ၏ကိုယ်ပိုင်ပုံစံရှိသည်။ Apple နဲ့ Microsoft ကမွေးစား .ics ဖိုင်များကို format တစ်ခုအနေဖြင့်…အသေးစိတ်ဖတ်ရန်ရိုးရိုးစာသားဖိုင်ဖြစ်သည်။ ဂူဂဲလ်သည် online ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုအနေဖြင့်အဖြစ်အပျက်အချက်အလက်များကိုလုပ်ဆောင်ရန်၎င်း၏ API ကိုအသုံးပြုသည်။
ICS Format ဆိုတာဘာလဲ
အင်တာနက်ပြက္ခဒိန်နှင့်အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းအဓိကအရာဝတ္ထုသတ်မှတ်ချက်ဆိုသည်မှာအသုံးပြုသူများအနေဖြင့်ဖြစ်ရပ်များ၊ အခမ်းအနားများ၊ ဂျာနယ်မှတ်တမ်းများနှင့်လွတ်လပ်သော / အလုပ်များသည့်သတင်းအချက်အလက်များစသည့်ပြက္ခဒိန်နှင့်အစီအစဉ်များကိုသိမ်းဆည်းရန်နှင့်လဲလှယ်ရန်ခွင့်ပြုသည့်မီဒီယာအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ သတ်မှတ်ချက်များအရ format လုပ်ထားသောဖိုင်များသည်များသောအားဖြင့် .ics တိုးချဲ့ခြင်းများရှိသည်။
AddEvent Apple ပြက္ခဒိန်များ၊ အွန်လိုင်းဂူဂဲလ်ပြက္ခဒိန်များ၊ Outlook၊ Outlook.com နှင့်အွန်လိုင်း Yahoo! တို့ကိုပေါင်းထည့်ခြင်းသို့မဟုတ်စာရင်းသွင်းခြင်းပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သောကုဒ်များနှင့်ဖိုင်များကိုထုတ်ပေးသောအလွန်သေးငယ်သော ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြက္ခဒိန်များ။ AddEvent သည် Add to Calendar link များနှင့်ခလုတ်များကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ရန်အတွက် online tools သာမက API တစ်ခုကိုလည်းပေးထားသည်။
AddEvent Options နှင့် Tools များပါဝင်သည်
Calendar Button ထဲထည့်ပါ (၀ ဘ်ဆိုဒ်များအတွက်) - သင်၏အသုံးပြုသူများကိုသင်၏ပြက္ခဒိန်များ၌သင်၏အဖြစ်အပျက်များကိုထည့်သွင်းရန်အတွက်မြန်ဆန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်း။ တပ်ဆင်ရလွယ်ကူ၊ ဘာသာစကားမမှီခို၊ အချိန်ဇုန်နှင့် DST သဟဇာတဖြစ်သည်။ ခေတ်သစ်ဘရောင်ဇာများ၊ တက်ဘလက်များနှင့်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်အားလုံးတွင်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်။
စာရင်းပေးသွင်းခြင်းပြက္ခဒိန် (ဖြစ်ရပ်မျိုးစုံ) - သင်ဖန်တီးထားသောပြက္ခဒိန်တစ်ခုကိုစာရင်းသွင်းခြင်းဖြင့်သင်၏အသုံးပြုသူပြက္ခဒိန်များသို့အဖြစ်အပျက်မျိုးစုံကိုလွယ်ကူစွာထည့်နိုင်သည်။ သင်သည်သင်၏ပြက္ခဒိန်တွင်ပင်ပြောင်းလဲမှုပြုလုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းပြောင်းလဲမှုသည်သင်၏စာရင်းပေးသွင်းထားသူများ၏ပြက္ခဒိန်အားလုံးအပေါ်တွင်မူတည်လိမ့်မည်။
ဖြစ်ရပ်များ (သတင်းလွှာနှင့်လူမှုရေးဝေမျှခြင်းအတွက်) - အသုံးပြုသူများကိုသင်၏အဖြစ်အပျက်များကိုသူတို့ပြက္ခဒိန်များသို့မည်သည့်နေရာတွင်သူတို့လေ့လာသည်ဖြစ်စေထည့်သွင်းနိုင်မည် - သတင်းလွှာများ၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သို့မဟုတ်တွစ်တာကဲ့သို့သောလူမှုမီဒီယာများ၊ သို့မဟုတ် MailChimp, Marketo သို့မဟုတ် Salesforce ကဲ့သို့သောစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိရိယာများဖြစ်ပါစေ။ AddEvent ၏အဖြစ်အပျက်သည်သင်၏လူမှုရေးမီဒီယာတွင်ဝေမျှနိုင်သည်သို့မဟုတ်သတင်းလွှာနှင့်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိရိယာများမှ link တစ်ခုအနေဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည့်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဆင်းသက်သည့်စာမျက်နှာတစ်ခုဖြင့်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကိုဖန်တီးရန်သင့်အားမြန်မြန်ဆန်ဆန်နာကျင်မှုမရှိစေသည်။
တိုက်ရိုက် URL နည်းလမ်း (နှင့် API's) - ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကိုပျံသန်းရန်သို့မဟုတ်သင်၏အသုံးပြုသူများကိုသင်၏ပြက္ခဒိန် ၀ န်ဆောင်မှုသို့ပို့ရန်သုံးရန်သို့မဟုတ်သင်၏အသုံးပြုသူများထံသို့သင်ပို့သောအီးမေးလ်နှင့်ပင်သင်၏အဖြစ်အပျက်ကိုပူးတွဲရန်အသုံးပြုနိုင်သည့်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သော link တစ်ခုဖြစ်သည်။ ။
၎င်းသည်သင့်အားမှတ်ပုံတင်သူနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုအမှန်တကယ်ကူညီသည့်အားကောင်းသော၊ သင်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုတည်ဆောက်နေပြီး add-to-ပြက္ခဒိန်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုလိုအပ်သည်ဖြစ်စေ၊ လူတိုင်းအတွက်အဖြစ်အပျက်သတိပေးချက်တစ်ခုဖြန့်ဝေနေသည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုသာဖြစ်ဖြစ်၊ AddEvent သည်ကောင်းမွန်သော platform တစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့ကလည်းကမ်းလှမ်း:
CalendarX - embeddable ပြက္ခဒိန်၊ subscription ပြက္ခဒိန်နှင့်ဒေတာစုဆောင်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုလုံးသည်တစ်ခုတည်းသို့လှိမ့်ဝင်နေသည်။ embeddable ပြက္ခဒိန်တစ်ခုအနေဖြင့်သင်၏ဖြစ်ရပ်များကိုသင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ကြည့်ရှုရန်အမှန်တကယ်ပြက္ခဒိန်ပေးခြင်းဖြင့်သင်၏ဖြစ်ရပ်များကိုအသုံးပြုသူများအတွက်အမြင်အာရုံဖော်ရွေစေသည်။ စာရင်းပေးသွင်းထားသည့်ပြက္ခဒိန်အနေဖြင့်သင်၏အသုံးပြုသူများသည်သင်၏ဖြစ်ရပ်များကိုသူတို့၏ပြက္ခဒိန်များသို့အလွယ်တကူထည့်သွင်းနိုင်စေပြီးမည်သည့်အဖြစ်အပျက်အပြောင်းအလဲ (မဆိုရွေးချယ်စရာများနှင့်ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောသရုပ်ခွဲမှုများရှိသော်လည်း Subscription Calendar tool နှင့်ဆင်တူသည်) ကိုမည်သည့်အဖြစ်အပျက်နှင့်မဆိုနောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပေးသည်။
Analytics မှ - ထိတွေ့မှုကိုခြေရာခံသည် အဖြစ်အပျက် - ထပ်ပြောသည်, ပြက္ခဒိန်စာရင်းသွင်းသူ နှင့်ပိုပြီး။ Analytics သည်သင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုပေးသည် ပြက္ခဒိန်များနှင့်ဖြစ်ရပ်များ Dashboard (သို့) the မှတဆင့်ဖန်တီးထားသည် ပြက္ခဒိန်နှင့်အဖြစ်အပျက်များ API.
Tags: ပြက္ခဒိန်ထဲသို့ထည့်ပါပြက္ခဒိန် link ကိုထည့်ပါကဗျာပန်းသီးပြက္ခဒိန်ပြက္ခဒိန် APIပြက္ခဒိန်ကြေးပြက္ခဒိန် Xembeddable ပြက္ခဒိန်အဖြစ်အပျက်ဆင်းသက်စာမျက်နှာအဖြစ်အပျက် link ကိုဂူဂဲလ်ပြက္ခဒိန်mailchimpစျေးကြီးOutlook ပြက္ခဒိန်outlook.com ပြက္ခဒိန်ရောင်းသူကြေးပေးသွင်းပြက္ခဒိန်yahoo ပြက္ခဒိန်